भारतीय किसान आन्दोलनको १२० दिन पूरा : आज बन्दविरुद्ध प्रदर्शन ! - नेपालबहस
भारतीय किसान आन्दोलनको १२० दिन पूरा : आज बन्दविरुद्ध प्रदर्शन !
| ७:१०:०४ मा प्रकाशित
१३ चैत, एजेन्सी । नयाँ कृषि कानुनविरूद्ध आन्दोलनरत भारतीय किसान युनियनलगायतका संगठनहरूले शुक्रबार भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्। होली र सर्वसाधारणको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै शान्तिमय बन्द गर्न लागिएको हो।
भारत बन्द आह्वानमार्फत किसानहरू कृषि कानुनहरू फिर्ता लिन र एमएसपी कानुनको कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइनेछ। यता किसान आन्दोलनमै सहभागी अन्य किसान संगठनहठनहरूले भने बन्दविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त किसान मोर्चाका अनुसार किसान आन्दोलनको १२० दिन पूरा भएको अवसरमा भारत बन्दको आह्वान गरिएको हो। संगठनले मार्च २६ मा बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म भारत बन्द घोषणा गरेका छन्।
अहिलेपनि हजारौं किसानहरूले दिल्लीको सिमानामा नयाँ कृषि कानुनविरूद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कांग्रेस, वामपन्थी लगायत विपक्षी दलहरूले बन्दको समर्थन गरेका छन्। किसान संगठनहरूले मार्च २८ मा होलीका दहनमा नयाँ कानुनको प्रतिलिपी जलाउने घोषणा गरेका छन्।
संयुक्त किसान मोर्चाका अनुसार भारत मार्च २६ मा पूर्ण रुपमा बन्द रहनेछ। पछिल्लो समय उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डमा बन्द आह्वान गरिएको छैन। यसपटक भारत बन्दको प्रभाव दिल्ली भित्र पनि देखिनेछ।
उत्पादन बढाउन भकारो सुधार अभियानमा किसान २ दिन पहिले
ओलीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी, माओवादी केन्द्रले आजै सर्मथन फिर्ता लिने १३ घण्टा पहिले
रसियाद्वारा चेक गणतन्त्रका २० जना कुटनीतिज्ञलाई देश निकाला १ दिन पहिले
अटोमा लैजाँदै गरेको २३ किलो गाँजासहित तीनजना पक्राउ ६ दिन पहिले
आठ महिनामा जुम्लामा १९ करोड राजश्व सङ्कलन ६ दिन पहिले
म्यान्मारमा सुरक्षाकर्मीको आक्रमणमा परी ८२ प्रदर्शनकारीकाे मृत्यु १ हप्ता पहिले
विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० लाख नाघ्यो २ दिन पहिले
मार्चमा चीनको आयात, निर्यात बढ्यो ७ दिन पहिले
प्रदेश नं १ बाट बुद्ध एयरले उडान भर्ने १ वर्ष पहिले
विश्वभर कोरोना कारण मृत्यु हुनेको संख्या ८३ हजार नाघ्यो १२ महिना पहिले
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिड्स युनाईटेडकाे जित १ महिना पहिले